Askarta iyo Qoryaha - The Holy Land of Vietnam Studies
2957 Views Prof. Assoc. HUNG NGUYEN MANH
I. Sida ku cad dukumiintiyada qaarkood, Vietnam sung hoa mai [súng hoa mai] (matoor) wuxuu caan ku ahaa qoryaha sung dieu thuong [súng điểu thương] (musket) wuu ka yaraa oo la adeegsaday laga bilaabo 16th illaa iyo qarnigii 19th. Daanyeero feeraha ah (Le, Mac, Trinh, Nguyen [Lê, Mạc, Tihinh, Nguyễn]) xirmo si buuxda u qalabaysan ciidanka. Diiwaanada taariikhiga iyo suugaanta ayaa ku sifeeyay dagaalada waqtigaas oo kale:Rasaasta duulaya sida xiddigo soo dhacaya”. Heesaha Folk ayaa sidoo kale duubay muuqaalka askar ahaan dad jaceyl ah:
Suun huruud ah oo ku wareegsan dhexda
Xiro koofiyad la calaamadeeyay, qoriga garbaha laga qaado
Hal gacan oo isku eg
Dhinaca kale wuxuu waran qaatay oo wuxuu u dhaadhacay doonnida asagoo raacaya amarka 'Mandarin'
Garaacista joogtada ah ee shan-garaaca ayaa la maqlay
Indhaha ayey dillaacdaa markii ay doonnida galayso.
Sawirka qoryaha ee hoose waxaa lagu sawiray 1908 - 1909 gudaha Hanoi [Hà Nội]. Waxay naga caawinaysaa inaan ka fikirno muuqaalka askarta wakhtigaas, ka hor Nguyen [Nguyễn] Dawlad.
Marka laga hadlayo muruqyada kor ku xusan, halkan waxaa ku yaal dukumeentiyo qaarkood oo naga caawinaya inaan fahamno:
II. Musket waa noocii ugu dambeeyay ee khiyaanooyinka ciidamada militariga Fiyatnaamiis intii lagu gudajiray nidaamyadii Mac, Trinh, Nguyen [Mac, Tihinh, Nguyễn] (laga bilaabo qarnigii 17aad). Halabuurka muruqyada ayaa ku dhaqaaqay dhaqdhaqaaqa xarkaha digaagga leh gogo 'flint. Farsamooyinka hawlgalku waa sidan soo socota:jiid jiid; matoorku wuxuu taabanayaa gabal bir ah oo iftiin leh”, Oo macnaheedu yahay:“ dib u riix hammer; ku xiro jabka si ay u dhawraan. Markaan jiid jiidno, dameerku wuu dhaqaajiyaa oo taabtaa gabal xaasaad ah oo dardar gelinaya qoryaha.
Sida laga soo xigtay John Pinkerston1, Sayidow Nguyen [Nguyễn] wuxuu ciidankiisa u qalabeeyay noocan ah sung dieu thuong [súng điểu thương] (muruqyada), sidoo kale loo yaqaan sung hoa mai [súng hoa mai] (isbarbar dhiga).
Dukumiinti kale ayaa muujisay in xilligii Qing (Shiinaha), waxaa jiray nooc ciyaartooy waaweyn oo loo baahnaa in labo qof ay ku shaqeeyaan: Mid ayaa qoriga saar garbaha kan kalena midka kale.
In Vietnam [Việt Nam], qoriga noocan ah ayaa hadda lagu soo bandhigayaa matxafyada. Sida la sheegay, Tay Wiil [Taa Sơn] ciidamadu waxay ka heleen farsamooyinka kor lagu soo sheegay Dang Trong [Tàng Trong] (Koonfurta Vietnam ee qarnigii 17-18naad) kuna fiicnaaday noocyo kale oo badan. Ciidamada milatariga waxay u isticmaaleen hubkan si hufan iyagoo uga mahadcelinaya dhaqankooda maalinlaha ah ee garoonka, oo umuuqday ciyaar. Si kastaba ha noqotee, gudaha Dang Ngoai [Àng Ngoài] (Waqooyiga Vietnam ee qarnigii 17-18naad), farsamadan waxaa sidoo kale loo isticmaalay dagaal awoodeed laba boqol oo sano. Sida biyaha iyo dabka, Sayidow Trinh [Tarahanh] la magacaabay Thuy Vuong [Thuỷ Vương] (Eebaha Biyaha) ciidankiisa xoogga ee xoogga badnaa awgood; Sayidow Nguyen [Nguyễn] la magacaabay Hoa Vuong [Hoả Vương] (Rabbi Naarta) maxaa yeelay ciidamadiisu waxay lahayeen hub culus oo dab dhaliya. Ka sokow, Sayidow Nguyen [Nguyễn] lahaa qaar ka mid ah hubka kale ee caadiga ah ee ciidanka sida hoa dheer [hoả dheer] (masduulaagii dabka), waa ho [ho haa] (shabeelka dabka) iyo qoryo jajab leh oo u shaqeynaya sidii bambooyin fudud.
Asal ahaan, musketka (dhagax -shubka) wuxuu ka yimid Yurub, ka dibna waxaa lagu soo kordhiyey Mareykanka iyo Aasiya. The Tay Wiil [Taa Sơn] ciidan waxaa loo tixgaliyay inay yihiin ciidan xoog badan sababtoo ah wanwanaagsanaanta muruqyada oo ka sarreeysay hawlgallada farsamada (kaliya afar dhaqaaq ayaa loo baahan yahay) halka ciidammada Ingiriiska iyo reer Yurub u baahdeen labaatan dhaqdhaqaaq. Gaar ahaan, qoryaha Qing (Jaantus) ayaa si tartiib tartiib ah dab ugu qabsaday laakiin qiiq aad u badan. Boqor Quang Trung [Quang Trung] qorigan wuxuu u isticmaalay dagaalada sidaa darteed khamiiskiisu wuxuu u badalay qiiq qiiq aawadiis.
Askar & Gunners waagii hore (Xigasho: Nguyễn Mạnh Hùng oo ku taal “Kỹ thuật của người An Nam” - Technique du peuple Annamite oo ka tirsan H. Oger (1908 -1909) oo ku taal Hanoi)
Xargaha ama gogo 'flint ayaa loo isticmaali jiray iswaafajinta. Markii dambe, isbadallada ayaa lagu beddelay qoryaha horumarsan, iyaga oo adeegsanaya waxyaabaha qarxa iyo kartoonno la mid ah qoryaha Yurub waqtigaas. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro Minh Mangwaa [Minh Ming] xukun, isbarbar dhiga waxaa lagu badalay qoryo (sababta oo ah hoos u dhaca ciidamada milatariga) laakiin leh tiro aad u fudud marka la barbar dhigo qarnigii hore, toban qof ayaa haysta hal qori.
Sida ku xusan xeerarka gudaha Nguyen [Nguyễn] Dawladnimo, ciidamadu waxay u qaybsameen laba nooc: Askarta dagaalka iyo askar difaaca. Askarta difaaca ayaa laga soo xushay Nghe An [Nghe An] ku Binh Thuan [Binh Thuan], kuwaas oo joogay cado [Huu]. Dagaalkii u dhexeeyey Faransiiska iyo Vietnam ee Waqooyiga, cado [Huu] maxkamad waxay dirtay askar ka tirsan 8,000 inay difaacaan waqooyiga Vietnam [Việt Nam], oo hoos yimaad amarrada Mandarin faneedyo sare. Askarta dagaalka dagaalka waxay joogeen Waqooyiga. Intaa ka dib, intii lagu jiray ilaalintii Faransiiska, askartan waxaa lagu beddelay linh kho xanh (askar buluug ah) (Jaantuska). Qaar ka mid ah askarta hartay waxay gacanta ku hayaan gudoomiyeyaasha gobollada.
1: JOHN PINKERSTON “Juqraafiga casriga: Sharaxaad ku saabsan boqortooyooyinkii, boqortooyooyinkii, dowlado, iyo gumeysi ay la galeen badaha, badaha, iyo jasiiradaha”.
Image Sawir muuqaal ah - ilo: faxuca.blogspot.com, nam64.multiply.com
(Booqday jeer 1,831, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,856
← LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 3
Noocyada DUGSIYADA GUUD EE XULASHADA iyada oo loo marayo FEYAL DYNASTIES →
Comments Off oo ku saabsan DHAQANKA iyo FANKA waqtigaas - qarnigii 15aad
Comments Off on RA GLAI Community of 54 kooxaha jinsiyadaha ee Vietnam